Chris Hemsworth – Cast – Burmese Subtitle
Snow White and the Huntsman (2012) Snow White and the Huntsman (2012) မွနျမာစာတနျးထိုး Twilight မငျးသမီး Kristen Stewart ကစနိုးဝှိုကျ အဖွဈလညျးကောငျး၊ Thor မငျးသား Chris Hemsworth က Huntman အဖွဈလညျးကောငျး၊ Italian Job မငျးသမီး Charlize Theron က စုနျးမအဖွဈလညျးကောငျး ပူးပေါငျးတငျဆကျထားတဲ့ ပုံပွငျဆနျဆနျ ဇာတျကားလေးပါ… သသေပျလှပစှာ ရိုကျကူးထားနိုငျပါတယျ… Review Credit
IMDB: 6.1/10 265,101 votes
Star Trek (2009) တဈကယျတော့ ဒီဇာတျကားဟာ တဈကယျကို ကောငျးမှနျတဲ့ Star Trek ဇာတျကားကောငျးတဈကားအဖွဈ ယခုဆို ရပျတညျနိုငျခဲ့ပွီလေ။ တဈကားလုံးကို ခွုံပွောရမယျဆိုရငျ Actions တှေ၊ Actions တှေ အရမျးမြားလှနျးတယျ။ တဈကားလုံးကို ဇာတျလမျးထကျ Actions တှကေ မြားလှနျးတော့ တဈခါတဈခါ အာရုံကိုမနညျးပွနျဖမျးရတယျ။ သို့ သျော Star Trek ရဲ့ ပုံပနျးထဲကတော့ ထှကျမသှားခဲ့ပါဘူး။ Star Trek ရဲ့ ဇာတျကားတဈကားဆိုတဲ့အတိုငျး Star Trek ခံစားခကျြကိုတော့ ရနပေါသေးတယျ။ ဒါဟာ Justin Lin ကို ခြီးကြူးရမှာ ဖွဈတယျ။ သူ ကြှမျးကငျြတဲ့ Action ခနျးတှကေို ပရိသတျသဘောကအြောငျ ထညျ့နိုငျခဲ့သလို Star Trek theme ထဲကနလေညျး ထှကျမသှားစရေအောငျ စှမျးဆောငျနိုငျခဲ့တာပဲ။ Justin Lin ကို သရုပျဆောငျတှရေဲ့ ပွောခကျြအရဆိုရငျ ...
IMDB: 7.9/10 565,372 votes
Men in Black: International (2019) (Zawgyi) Men in Black: International (2019) သည် IMDb 5.7/10 Google users 78% ရထားပြီး ဒါရိုက်တာ F. Gary Gray ရိုက်ကူးထား၍ Matt Holloway, Art Marcum တို့က ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းရေးသားကာ သရုပ်ဆောင် Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Action, Adventure, Comedy ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်ခြင်းအားဖြင့် တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ…Men in Black ဟာ စကြာဝဠာမှ ကမ္ဘာကို ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကို အမြဲတမ်း ကာကွယ်နေပါတယ် ဒီ စွန့်စားခန်းအသစ်မှာ သူတို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ခြမ်းခြောက်မှုကို Men in Black အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဘယ်လို ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်စွန့်စားရမလဲ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါခင်ဗျာ… Credit Review (Unicode) Men ...
Avengers: Endgame (2019) 4K ပထမဆုံးအနေနဲ့ Endgame ရဲ့ သုံးနာရီဟာ ရှည်လွန်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ကြည့်နေရင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စီးမျောသွားပြီး အချိန်ကုန်လို့ ကုန်မှန်းမသိလိုက်တဲ့ အထိကို ကောင်းလွန်းပါတယ်။ Endgame ဟာ MCU ဆယ့်တစ်နှစ်တာရဲ့ အဆုံးသတ်ဆိုတာနဲ့ အညီ Iron Man (2008) က စလို့ လမ်းဖောက်ခဲ့တဲ့ MCU ရဲ့ Infinity Saga ခရီးဟာ အဆုံးကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ Endgame ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ခံစားချက်မျိုးစုံပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြဖို့ မတတ်စွမ်းနိုင်တာကြောင့် review ရေးရတာ တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ Endgame မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကောင်တွေအပြင် supporting role တွေကိုပါ role အနိမ့်အမြင့်ညီအောင် မျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ Infinity War က အရှိန်မသေသေးတာကို ပြသွားပြီး နောက်တော့ Endgame ရဲ့ plot နဲ့ ...
Avengers: Endgame (2019) ပထမဆုံးအနေနဲ့ Endgame ရဲ့ သုံးနာရီဟာ ရှည်လွန်းတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ကြည့်နေရင်း ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စီးမျောသွားပြီး အချိန်ကုန်လို့ ကုန်မှန်းမသိလိုက်တဲ့ အထိကို ကောင်းလွန်းပါတယ်။ Endgame ဟာ MCU ဆယ့်တစ်နှစ်တာရဲ့ အဆုံးသတ်ဆိုတာနဲ့ အညီ Iron Man (2008) က စလို့ လမ်းဖောက်ခဲ့တဲ့ MCU ရဲ့ Infinity Saga ခရီးဟာ အဆုံးကို ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ Endgame ဟာ ကျွန်တော့်အတွက် ခံစားချက်မျိုးစုံပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး စကားလုံးတွေနဲ့ ဖော်ပြဖို့ မတတ်စွမ်းနိုင်တာကြောင့် review ရေးရတာ တော်တော်လေးခက်ခဲပါတယ်။ Endgame မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်ကောင်တွေအပြင် supporting role တွေကိုပါ role အနိမ့်အမြင့်ညီအောင် မျှပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ Infinity War က အရှိန်မသေသေးတာကို ပြသွားပြီး နောက်တော့ Endgame ရဲ့ plot နဲ့ ...
Avengers: Age of Ultron (2015) ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အစကိုတော့ Winter Soilder ရဲ့အဆုံးကနေဆက်ထားပါတယ်။ Hydra အဖွဲ့ရဲ့လက်ထဲက Loki ရဲ့ တုတ်ကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြီးယူလာတာကနေ စထားပါတယ်။ တိုနီစတာ့ခ်(Ironman) နဲ့ ဘရုစ်ဘန်နာ(Hulk)တို့ဟာ တောင်ဝှေးရဲ့အကူအညီနဲ့ ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးထိန်းသိမ်းမှု ပရိုဂရမ်(Ultron) ကိုတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Ultron တကယ်နိုးထလာတဲ့အခါမှာ သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်းမဟုတ်ပဲ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အဆုံးသတ်အထိပါဖြစ်လာတဲ့အခါ သူတို့ ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ တိုးလာတဲ့ Avenger အသစ်တွေကိုလဲ တွေ့ရပါတော့မယ်။ ဇာတ်ကားကို ကောင်းကောင်းခံစားနိုင်အောင် အညွှန်းမှာ အများကြီးမရေးထားတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ် ဘယ်လောက်ပဲအများကြီးရေးပေးပေး ဘယ်လိုမှ မပြည့်စုံနိုင်တဲ့အချက်ကတော့ ဇာတ်လမ်းထဲက ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်လောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှု scenesတွေပါပဲဗျာ။ ကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့ရယ် ကောင်းကောင်းခံစားချင်တယ် ကောင်းကောင်းနားလည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ၃ ခေါက်လောက်တော့ ပြန်ကြည့်ကြပါလို့ပဲ ပရိသတ်ကြီးကို အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ File Size – 2.25GB Quality – Blu-Ray 1080P 6CH Running ...
The Avengers (2012) The Avengers (2012) ဇာတ်ကားလေးသည် IMDb 8.1 Rotten Tomatoes 92 % ရထားသော Action, Sci-Fi ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်လို့ချစ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဆက်လိုက်ပါရစေ… ကမ္ဘာကြီးကို အုပ်စိုးဖို့ကြံသော လူဆိုးကြီး လိုကီနဲ့ သူရဲ့အပေါင်းအပါတစ်စုအား ရပ်တန့်ရန် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အစွမ်းအရှိဆုံးသူရဲကောင်းများ အတူတူ အုပ်စုဖွဲ့ကာကွယ်ကြပုံများကို ရင်သတ်ရှုမောကြည့်ရှုဖို့ ဇာတ်ကားမှာ ဆက်ဆက်ခံစားလိုက်ကြပါလို့……. Review Credit by Win Kyaw Thu
Thor: Ragnarok (2017) Plot မိုးကြိုးနတ်ဘုးရားကြီး Thor ဟာ Loki စနက်ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပြဿနာတွေ လိုက်ရှင်းရင်း Asgard နဲ့တကွ Realm9ခုလုံးကို သိမ်းပိုက် သွေးချောင်းစီးဖို့ ကြိုးပမ်းလာတဲ့ Hela ဆိုတဲ့ Goddess of Death ကို ရင်ဆိုင်ရပါတော့တယ်။ … Review (Minor Spoiler Alert) Ragnarok ဟာ နိုင်ငံတကာက Reaction တွေ review တွေမှာ တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ Marvel ရဲ့ ပျော်စရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသကားတွေနဲ့ နာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Taika Waititi လက်ရာဆိုတော့လည်း ဒီလောက်တော့ရှိမပေါ့။ တစ်ကားလုံး ရုပ်တည်နဲ့ဖေါက်တာ၊ နာမည်တလွဲတွေပေးထားတာ၊ တလွဲတွေဖြစ်တာ စတာတွေအပြင် ထင်မထားတဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ကောင်က Cameo နဲ့ ဝင်ပြောင်လိုက်သေးတယ်။ (Guess who?) ရယ်ရတာတွေများတယ်ဆိုပေမဲ့ တစ်ကားလုံး ပေါသောနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ရယ်ရတဲ့ဟာ ရယ်ရ၊ ...
The Cabin in the Woods (2011) The Cabin In The Woods (2012) ဆယ်ကျော်သက်လူငယ် ငါးယောက်ရဲ့ အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးက တောထဲက သစ်လုံးအိမ်လေးဆီကို ဦးတည်နေပါတယ်။ အသေးစားပါတီလေးလုပ်ပြီး သောက်စားပျော်ပါးကြမယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့သေချာမသိထားတာက သူတို့သွားမယ့် သစ်လုံးအိမ်လေးအကြောင်း။ အရွယ်အစားသေးငယ်လှတဲ့ အဆိုပါသစ်လုံးအိမ်လေးမှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကြီးမားလှတဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေတယ်။ အစီအစဉ်တကျဖန်တီးယူထားတဲ့ အစိုးရစီမံကိန်းတစ်ခုအောက်မှာရှိနေတဲ့ ဒီသစ်လုံးအိမ်လေးကို သူတို့တွေသွားဖို့ဖြစ်လာတာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်မလာဖို့ကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် နိုင်ငံအသီးသီးက ကာကွယ်ကြရတယ်။ အဲလိုကာကွယ်ရတဲ့ အခါမှာ နိုင်ငံတိုင်းအောင်မြင်ဖို့မလိုဘူး။ တစ်နိုင်ငံအောင်မြင်ရင်ရပြီ။ ဒီနှစ်မှာတော့ သူတို့ငါးယောက်ကို အသုံးချပြီး ဒီစီမံကိန်းအောင်မြင်နိုင်မလား။ ဒီသစ်လုံးအိမ်လေးကို ထိန်းချုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းက ဒီအိမ်လေးရဲ့ မြေအောက်တစ်နေရာမှာတင် စခန်းချနေရာယူထားတယ်။ သူတို့ရဲ့ အစီအစဉ်ကတော့ ဒီအိမ်ကိုရောက်လာတဲ့ လူရွယ်ငါးယောက်ထဲက အပျိုစင်မိန်းကလေးကလွဲပြီး ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုသေအောင် သတ်ဖို့ကြိုးစားရမှာပါ။ သတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှလည်း ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ထိလက်ရောက်သတ်တာမျိုး မဟုတ်ပဲ ဒီငါးယောက်က ရွေးချယ်တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မူတည်နေပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းမှာ စုဆောင်းဖန်တီးထားတဲ့ သရဲတစ္ဆေမိစ္ဆာမကောင်းဆိုးဝါး သတ္တ၀ါမျိုးစုံရှိပါတယ်။ ...
IMDB: 7.0/10 336,463 votes
In the Heart of the Sea (2015) 1820 က ပင်လယ်ပြင်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ဝေလငါးဖမ်းသင်္ဘော Essex ရဲ့ အဖြစ်ဆိုးအကြောင်းကို ရေးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းစာအုပ်ကို ရုပ်ရှင်အဖြစ်အသက်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ငါးဖမ်းထွက်လာတဲ့ Whaling Ship Essex ဟာ ဒေါသူပုန်ထနေတဲ့ Sperm Whale တစ်ကောင်ရဲ့ တိုက်ခိုက်တာခံခဲ့ရပြီး သင်္ဘောလည်း နှစ်ခြမ်းကွဲတယ်။ သင်္ဘောသားတွေမှာ ရက် (၉၀) လောက် ပင်လယ်မှာမြောနေရင်းနဲ့ အစာရေစာငတ်ပြတ်လာလို့ နောက်ဆုံးမှာ လူသားချင်း ပြန်စားချင်စိတ်တွေပါ ပေါက်လာခဲ့တဲ့ တော်တော်ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အကြောင်းပါ။ In the Heart of the Sea ကို A Beautiful Mind ရုပ်ရှင်နဲ့ Oscar ရရှိခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Ron Howard က ရိုက်ကူးထားတာပါ။ အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် Thor မင်းသား Chris Hemsworth နဲ့ ...
IMDB: 6.9/10 108,079 votes
Ghostbusters (2016) Ghostbusters(2016) ============== 2016 ထွက်မယ့် ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ ကြည့်ချင်နေပေမယ့် သိပ်တော့မျှော်လင့်မထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Ghostbusters ပါပဲ။ တစ္ဆေဖမ်းသူများပေါ့။ Rating ကလည်း 5.5 ပါ။ မနေ့က ထွက်လာတော့ ကြည့်လိုက်မိတဲ့အချိန်မှာ နည်းနည်းတော့ အံ့အားသင့်သွားမိတယ်။ ဇာတ်လမ်း အဖွင့် အလည် အဆုံးက ကျေနပ်စရာလေး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ အဖွင့်မှာ နိဒါန်းပျိုးသွားပုံလှတယ် သူတို့ အဖွဲ့ကို အလည်မှာ တည်ဆောက်သွားတာ အသက်ဝင်တယ် အဆုံးမှာ ကျေနပ်စရာ တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ဇာတ်သိမ်းရလိုက်တယ်လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Thor နဲ့ Huntsman ကားတွေရဲ့ သရုပ်ဆောင်ကြီးက ဒီကားမှာ သူ့ကိုတွေ့တိုင်းရယ်နေရအောင် ကောင်းကောင်းအစွမ်းပြသွားတယ်လို့လဲ ပြောလို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်က တစ္ဆေသရဲနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို ယုံကြည်ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်တောင် အတူရေးခဲ့တဲ့ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် အယ်ရင် နဲ့ အက်ဘီ။ အယ်ရင်ဟာ ...
IMDB: 5.2/10 186,126 votes
Avengers: Infinity War (2018) ရုံတင်ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Infinity War ===================== MCU ရဲ့ ဆယ်နှစ်ကြာ ခရီးလမ်းမှာ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ Event ကိုရောက်လာအောင် တောက်လျှောက်တည်လာခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်သံစီးရီးတစ်ခုရဲ့ ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံး အပိုင်းကို ကြည့်ရသလိုလည်း ခံစားရပါတယ်။ (( ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း )) စကြာဝဠာရဲ့ ထောက်တိုင်တွေလို့ ရည်ညွှန်းကြတဲ့ Power, Reality, Mind, Soul, Time နဲ့ Space တို့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Infinity Stone တွေဟာ တစ်ခုချင်းဆီမှာ တခြားဘယ်အရာနဲ့ မှ မတူတဲ့ စွမ်းအားတွေရှိသလို အားလုံးကို စုစည်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့ စကြာဝဠာ တစ်ခုလုံးကို မိမိစိတ်အလိုရှိသလို ပုံသွင်းနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးကို ရရှိသွားမှာပါ။ တိုက်တန်ဂြိုဟ်ပေါ်က Mutant တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Thanos ဟာ Mind stone ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ Space stone ကိုရရှိဖို့ Loki ကို ဦးဆောင်ပြီး စေလွှတ်ခဲ့ပေမယ့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့နောက် (ပထမဆုံး Avengers ကားတွင်ကြည့်ရန်) သူကိုယ်တိုင် infinity ...
Doctor Strange (2016) ဒီတစ်ခါ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ဖို့ ညွှန်းချင်တဲ့ ဇာတ်ကားကတော့ အမေရိကန်စူပါဟီးရိုးဇာတ်ကားသစ်လေးဖြစ်တဲ့ Doctor Strange ပါ။မာဗယ်လ် စတူဒီယိုကနေ ထုတ်လုပ်ကာ ဝေါ့လ်ဒစ္စနေ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေ ဖြန့်ချိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကန်ဒေါ်လာ ၈၇ ဒသမ ၇ သန်း ဝင်ငွေရရှိခဲ့သလို ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမားတွေရဲ့ ကောင်းတဲ့မှတ်ချက်ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း ------------------- စတီဗင်စရိန့်ခ်ျဟာ ဦးနှောက်နဲ့အာရုံကြောဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်ဆရာ ဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး တစ်ရက် မှာတော့ ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ် ကာ သူ့ရဲ့တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ခွဲစိတ်တဲ့ လက်တွေ လုံးဝအသုံးပြုလို့မရ အောင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခဲ့ပါ တယ်။ သူ့ရဲ့ချစ်သူဟောင်းလည်း ဖြစ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်းဖြစ် တဲ့ ခရစ္စတင်းပယ်လ်မာက သူ့ကို အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ပေမယ့် စိတ် ကြီးတဲ့ ဒေါက်တာစရိန့်ခ်ျကတော့ သူ့လက်က ဒဏ်ရာကို ကုသဖို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်တွေကို ကြိုးတွေနဲ့ ထိန်းပြီး ခွဲစိတ်ထားပေမယ့် အ ရင်လိုပြန်ပြန်မဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေ အနေမို့ စရိန့်ခ်ျတစ်ယောက် ...
Thor (2011) လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းများစွာက စကြ၀ဠာတွင် အဖွဲ့ အစည်း ၃ ခုတည်ရှိသည်။ Giant Frost, Asgard နှင့် လူသား မျိုးနွယ်များဖြစ်သည်။ Giant Frost က လူသားမျိုးနွယ်စု နေထိုင်သည့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကျူးကျော် တိုက်ခိုက်သည်။ သို့ သော် Asgard က အနှီ ကျုးကျော်မှုကို လက်မခံပဲ Giant Frost များကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Asgard လူမျိုးနွယ်စုက အနိုင်ရရှိပြီး Giant Frost မှ အရေးကြီး ဆုံး လက်နက်ကို သိမ်းပိုက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်သည့် သဘောတူညီချက် ကိုပြုလုပ်သည်။Asgard ဘုရင် တွင် သားတော် ၂ ပါး Thor နှင့် Loki ရှိသည်။ Thor သည် စစ်မှုရေးရာတွင် ကျွမ်းကျင်သော်လည်း အင်မတန် တိုက်ခိုက်ချင်စိတ်များကာ မရင့်ကျက်သေးသည့် စစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ Thor ...
Avengers: Infinity War (2018) BS ပရိတ်သတ်စစ်စစ်တွေအတွက်... DC ရဲ့ Justice League ကျတော့ 4K HDR တင်ပြီး MCU ပိုင်းက မတင်ဘူးလားလို့ ပြောနေကြလို့ တောင်းဆိုတာများတဲ့ Infinity War ကို 4K HDR နဲ့ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ ကြည့်ရှုလို့ ပြီးသွားရင်တော့ အရင်က ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ 1080p ကိုတောင် မေ့သွားနိုင်ပါတယ်....အေးဆေးဇိမ်ခံချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အမှန်အကန် ဇိမ်နဲ့ နှပ်လို့ရပြီဗျာ....... ရုံတင်ရုပ်ရှင်အညွှန်း – Infinity War ======================= MCU ရဲ့ ဆယ်နှစ်ကြာ ခရီးလမ်းမှာ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ Event ကိုရောက်လာအောင် တောက်လျှောက်တည်လာခဲ့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်သံစီးရီးတစ်ခုရဲ့ ဇာတ်ရှိန်အမြင့်ဆုံး အပိုင်းကို ကြည့်ရသလိုလည်း ခံစားရပါတယ်။ (( ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း )) စကြာဝဠာရဲ့ ထောက်တိုင်တွေလို့ ရည်ညွှန်းကြတဲ့ Power, Reality, Mind, Soul, Time နဲ့ Space တို့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Infinity Stone တွေဟာ တစ်ခုချင်းဆီမှာ ...
Blackhat (2015) တရုတ် အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုတစ်ခု Hack လုပ်ခံရပြီး ထပေါက်တယ်။ အစိုးရက ရှင်းဖို့လုပ်နေတုန်း အမေရိကန်မှာလည်း stock exchange တစ်ခု hack ခံရတယ်။ ဒါနဲ့ US နဲ့ China ပေါင်းပြီး Hacker ကို လိုက်ဖမ်းဖို့လုပ်တယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ လူဆိုးသုံးသွားတဲ့ code က hack မှုနဲ့ ထောင်ကျနေတဲ့ ဇာတ်လိုက် ကျောင်းတုန်းက ရေးထားတဲ့ code ဖြစ်နေတော့ ဇာတ်လိုက်ကို ထောင်က ခဏလွှတ်ပေးပြီး hacker နောက်လိုက်ကြပါတယ်။ Blackhat ကားက ရှင်းရှင်းပြောရရင် တတ်ယောင်ကားလုပ်ထားတဲ့ကားနဲ့တူတယ်။ Hacking အကြောင်းလည်း ပြချင်တယ်၊ ပြလည်းမပြတတ်ဘူး။ (ဇာတ်လမ်း ဇာတ်ညွှန်းလည်း ဆိုးတာပါမှာပေါ့)။ နောက်ဆုံးမှာ အနုမြူဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ဘာကြောင့် hack တာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကြီးက ပေါတောတောနိုင်တယ်။ ရိုက်ထားတာတွေကလည်း တချို့အခန်းတွေမှာ မလိုအပ်ပဲ ထည့်ထားတဲ့ အပို ...
IMDB: 5.4/10 47,390 votes